Ihe - 1aviagem.com
Ndewo onye ọ bụla, tupu ịmalite m na-eche na nke a bụ mkpado-ala blog. lol
Kedu ihe ị pụtara? (Adị m akọwaworị)
Ọfọn, ịhụ otú ịmegharị blọọgụ na vlogs na weebụ ahụ, blọọgụ mbụ batara, ugbu a ọkpụkpụ ahụ na-akwaga na vlogs.
Nke a dị iche na ọ malitere dị ka vlog (channel Youtube 1aviagem) ma ugbu a ghọọ blog. Ọ bụ ya mere m ji kwuo na ọ bịara azụ. =)
Ma gịnị meghee blog ma ọ bụrụ na i nweela vlog?
Ihe kpatara ya dị mfe karịa ka ọ na-ada! Na-agba ọsọ kwa ụbọchị, 8 awa na-arụ ọrụ, na + 1 nri ehihie, na-ehicha ụlọ + na-aga ahịa + ọrụ ọ bụla kwa ụbọchị. Nke a n'onwe ya ejiriwo oge buru ibu!
Ugbu a gbakwunye na nke a: + dee vidio + dezie + dozie egwu adịghị emebi ikike nwebiisinka + mee ka ụda okwu na vidio + mee mgbanwe ... phew! Abịara m nkwubi okwu na-esonụ: "Ọ kacha mma ịhapụ nke a maka ndị ọkachamara ..."
Adị m onye na-amu amu, onye na-enwe mmasị ide banyere njem na akụkọ banyere ebe. Ya mere na blog ọ na-adị mfe! Oge ntụrụndụ na-ewe oge na-erughị ala ma na-enwekwu ihu ọchị nke ọbụlagodi na ọ bụghị ụbọchị ọrụ nke abụọ! hehe.
Ya mere, ebe a ka ọ ga-abụ ebe kachasị elu nke 1aviagem na ị ga-enwe. Dịka ọ bụ njem m ga-eweta ọdịnaya nke ọwa youtube ebe a, imeju ihe niile ebe a. Yabụ, na njedebe nke ederede ị nwere ike ịhụ vidiyo naanị pịa njikọ ahụ. (n’enweghi ike icho Google ozo ichota ya).
Ihe ọzọ kpaliri m ịkwaga bụ na m bụkwa onye njem. Ma amaara m na ọ dịịrị gị mfe ịchọ ihe edere ederede, dochie na mado ebe ọ bụla ị chọrọ, mgbe ị na-ahazi edemede gị. Na maka ndị ahụ na-eme atụmatụ ma mebie edemede n'onwe ya (dịka m) nke a na-eme ka ọ dị mfe karị! Na vidiyo ị gaghị eme nke a ... = ((maka ugbu a)
N'ikpeazụ, onye na-agba ọsọ kwa ụbọchị nke onye na-agụ ya, mgbe niile #Ọ bụ anyị niile mmadụ ma anyị chọrọ ezumike. Kedu maka ịgụ banyere mba n'oge ya? Ma gụọ na RHYTHM gị, nwee ike ịlaghachi na ederede ahụ, ma ọ bụrụ na o doro anya, maọbụ ọ bụrụ na ọ dị njọ, hapụ ihe ndị ị chọpụtara. Ọ na-akawanye mma?
Echiche ahụ ka dịkwa otu (Blog na Vlog) na-ezukọta ndị si n'akụkụ ụwa dum ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala na-ede akụkọ sitere na ụwa, na-ekwu banyere ọdịbendị, na-eme ka mmadụ na-agagharị, ma site na ịgụ ma ọ bụ mkpali.
Na ndị na-enweghị ike ịga njem (ma ọ bụ oge ọ bụla ma ọ bụ nhọrọ) na-ewetara ha ọdịnaya banyere ihe na-eme n'èzí na n'ime ala.
Nabata! = D